Posted on फ्रेवुअरी 6, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
एक नेपाली अनुहार अहिले अमेरिकी सिनेमाको केन्द्र हलिउडमा छाइरहेको छ । सोह्र वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि अमेरिकाको फिल्म राजधानी हलिउड घुम्न गएकी श्वेता लामिछानेले अहिले त्यहाँ व्यावसायिक रुपमा अभिनय गर्न थालेकी छिन् । दुइटा चलचित्रमा प्रमुख भूमिकामा र तीनवटा टिभी शोमा अभिनय गरिसकेकी यी २६ वर्षे युवती सम्भवतः हलिउड फिल्म उद्योगमा प्रवेश गर्न सफल पहिलो नेपाली महिला हुन् । लक्ष्य बनाउने अनि त्यसलाई पाउन सक्दो मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने उनी त्यहाँ सफल अभिनेतृका रुपमा स्थापित हुन कम्मर कसेर लागेकी छिन् ।
दिदी पि्रयंकाका अनुसार अलि सानी छँदा लजालु स्वभावकी भएपनि श्वेता सिँगारपटार गर्न र अरुको नक्कल गर्न भने सिपालु थिइन् । ‘खेल्दा पनि उसलाई सकेसम्म केही नौलो गर्नैपर्ने । कहिले बूढी भएको नक्कल गर्थी त कहिले अर्कै मान्छेको जस्तो,’ नेसनल जियोग्राफीक सोसाइटीमा सम्पादक रहेकी उनले आफ्नी माहिली बहिनीका ’boutमा भनिन् । प्रायःजसो कल्पनामा रम्ने श्वेतामा अलि ठूली भएपछि नै अभिनय गर्ने इच्छा पलायो । ‘हाइस्कुल पुगेदेखि नै ऊ लस एन्जलस जाने र अभिनय गर्ने कुरा गर्थी,’ पि्रयंका थप्छिन् । तर हरेक दिन हलिउडको कुरा गर्न रुचाउने र त्यसैको सपना देख्ने श्वेता हाइस्कुलपछि भने अभिनयमै करिअर बनाउन सकिने कुरामा निश्चित हुन सकिनन् । कहिले बिजनेस त कहिले साइकोलोजी पढ्ने विचार गर्दै गरेका बेला उनी अमेरिकी नौसेना युनाइटेड स्टेट्स मरिन कोर (युएसएमसी) मा भर्ती भइन् ।
अमेरिकाको साउथ क्यारोलाइनाको पेरिस आइल्यान्डस्थित केन्द्रबाट तीन महिने कडा तालिम सफतलापूर्वक सकेपछि उनका अगाडि जलसेना र स्थलसेनामा प्रवेश गर्न ढोका खुल्यो । त्यसपछि उनी नर्थ क्यारोलाइनाको क्याम्प लाजुने गइन् जहाँ उनले थप एकमहिने कम्ब्याट तालिम लिइन् । त्यसपछि २९ पाल्म्स क्यालिफोर्नियामा तीन महिने जब ट्रेनिङमा उनी उत्कृष्ट ठहरिइन् । त्यसपछि उनले नयाँ मरिनलाई तालिम गराउनुपर्ने भयो । तालिमका बेला श्वेता कम्पनी कमान्डरको निजी चालक थिइन् । दुई वर्षपछि उनले सादर बिदा (अनरेबल डिस्चार्ज) पाइन् । मरिन कोरमा रहँदा पनि उनको हलिउड सपना ज्युँकात्युँ रह्यो । फेरि भर्ती भएर नौसेनाको जागिर खाने अवसर छोडेर उनी कोलोराडो गइन् । इतिहास विषय लिएर पढ्दै गरेकी उनी बीचमै पढाइ छोडेर सन् २००७ को बसन्तमा लस एन्जलस छिरिन् । ‘मलाई थाहा थियो, ऊ एक दिन एलए (लस एन्जलस ) जान्छे जहाँ उसको सानैदेखिको सपना हलिउड छ,’ श्वेताकी ‘नजिककी साथी’ दिदी पि्रयंका भन्छिन् ।
हलिउड छिर्दा श्वेतासँग सपनामात्रै हैन, क्षमता पनि थियो । परिवारले पनि हौसला दियो । नौसेनाको तालिमले दिएको आत्मविश्वासका साथ उनी रंगमंचसम्बन्धी औपचारिक पढाइ गर्न थालिन् । एल क्यामिनो कलेजमा पढाइसँगै सामुदायिक नाटकमा पनि अभिनय गर्नथालिन् जुन अहिले पनि जारी छ । कलेजपछि उनले बेभर्ली हिल्समा प्रवेश पाएकी हुन् जहाँबाट उनलाई अनेकौं अवसरले चिहाइरहेका छन् । अहिले दैनिक रिहर्सल र अडिसनमा उनको जीवनको पाटो भएको छ ।
« कुबेतमा लुक्कीको अन्न पासनमा,हाम्रो अग्रिम शुभ कामना प्रबासमा नेपालीको गौरब,ब्रिटेनको फुटबल क्लबमा नेपाली मालिक »